Netherlands: Fransiiska oo Soo Furtay Nin Hollandees ah oo Ku Afduubnaa Mali + video – fogaanarag
Wararka / Wararka Holland | By Ali Dahir
Netherlands: Fransiiska oo Soo Furtay Nin Hollandees ah oo Ku Afduubnaa Mali + video
Ciidamadda Gaarka ee Fransiiska ayaa soo furtay nin Hollandees ah oo ku afduubnaa dalka Mali sida ay maanta shaacisay wasaaradda Difaaca Dalka Fransiiska.
Madaxweynaha Fransiiska Francois Hollande oo shaaciyay howlgalka lagu soo furtay ninka Hollandeeska ah ee ku afduubnaa Maali tan iyo bishii November 2011 ayaa sheegay in Ciidamada Fransiiska ee fuliyay howlgalkaan aysan filanaynin in ay soo badbaadiyaan la hayste.
Waxa ay nagu noqotay la yaab in aan soo xureynay qof la haystay, Waxba kalama socon in qof lagu haysto goobta ay ciidamada weerareen ayuu yiri isagoo la hadlay warbaahinta Fransiiska.
La haystaha Hollandeeska oo lagu magacaabo Sjaak Rijke ayaa Islaamiyiin Argagaxiso ah ay ka qafaashay Timbuktu 2011 waxaana lala qabsaday labo qof oo kale.
Xaaskiisa oo la socotay markii la qabsanayay ayaa ka baxsaday afduubayaasha, iyadoo kadibna laga gudbiyay saxaraha Africa, howlgalka lagu soo furtay ayaa ka dhacay waqooyiga Mali aroortii hore ee maanta sida ay sheegtay wasaaradda Arimaha Difaaca Fransiiska.
Rijke, oo la sheegay in uu fiican yahay caafimaad ahaan ayay soo qaadeen Ciidamada Fransiiska kadibna waxa ay geeyeen saldhig ay ku leeyihiin Tessalit, iyadoo dad kale oo badan lagu soo qabtay howlgalka, balse lama faafaahin dadka kale ee ay soo badbaadiyeen.
Rijke, waa darawal train waxa uuna ahaa 51 jir markii koox dablay aheyd oo aad u hubeysneyd ay ka qafaasheen Hotel ay joogeen isaga iyo xaaskiisa, waxaana xiligaasi lagu toogtay goobta nin germal ahaa oo diiday in uu raaco dablayda.
Filim muuqaal ah oo la soo daayay Novembertii hore ayaa waxa laga daawaday Rijke oo shacabka Hollandeeska ka codsaday in ay cadaadis saaraan Dowladda Holland si ay u aqbasho codsiga Islaamiyiinta uu u afduubnaa, waxaana halkaasi lagu haystay saddax sanno iyo bar.
Halkaan Ka Daawo Muuqaalka warkan